Short Story: Ini na Getty, Babie repaNext Door! – VanodaZvinhu
by DrSviro · November 25, 2015
Kubva musi waakauya kumba kuzosara achichengeta imba yasisi vake ,Geti aindinzwisa dzungu.
Ndaishaya kuti Geti ndotaura naye sei.Mazuva ese Geti airara nekamwana kasisi vake karigrade one.
Ndaiti ndikanzwa achivhura door ndaitora cup ndoenda pasink ndonyebera kunwa mvura.Maksen ega-ega ndaimunzwa achitsvaira ndobuda panze kuti ndinoona zvidya zvemwana sezvo iye achifarira kupfeka mamini sterek.
Oneday ndakamuona achisuka ari pasink ndikati ‘Geti , ndeip nhasi ndichauya kuzoona African movie mumba menyu’
Akanditi iye zvaisaita kuti ndiuye ndikabva ndainsista ndikati please nhasi ndiri ndega saka ndiri kubhowekana.She gave up akangoti horaiti huya hako.
Pandakapinda mumba mavo ndakasvika ndakabata movie inonzi The best Man. Ndakamuti ngatipleyeyi movie iyi koz iri bho.She said kana zviri zvinonyadzisira handidi ndikati mayaz hainyadzisire but inotonakidza.
Takaiona kusvika nechepakati.Geti ainge akagara zvake pasofa akafuga jira ,ini ndainge ndakagara pachair.Ndakanyebedzera kunzwa chando ndikatanga kungwenda zvakaipa, apo ndaizviitisa zvangu.Ndakanzwa oti ko huya hakoka ugare pasofa panodziya koz movie yako iri bho.Ndakati nechemumumoyo ‘BHASOP’.Handina kupedza two seconds ndanga ndatopindawo mujira.Shasha yanga yatopfeka zvayo night dress.
Pamovie iyi pane episode inokwirwa musikana vakamira.Pakasvika ipapa ndikaona mwana avakungo fijita-fijita.ndabva ndangogaya kuti akuwara nezemo mwana.Ndakazvipira ndikabva ndasebera mudhuze make ndikati ende urikudziya wena,iye akati shuwa here achinyemwerera.Mboro yangu yakamuka paakandinyemwerera.
Ndakangozvipira ndikatanga kubata gumbo rake zvinyoro-nyoro.Ndaifunga kuti achabvisa maoko angu obva andijinyura asi ndakaona ari zii achitoteerera zvake.Ndakaramba ndichibata ndichiuya kuno kubeche ndikaona munhu aakuresponda.Ndakabata muzasi mebeche ndikanzwa munhu atototesa kare.Ndakazonzwa munhu oti Ah iwe urikuita sei kani iwe ah
Aka mboti :
Oh don not touch me you bastard………..
Oh do not touch me you……….
Oh do not touch me……..
Oh do not touch….
Oh do not …
Oh do ..
Apa pese ndairamba ndichingobata chete kusvikira shasha yazondimbundirawo.Ndakati nechemumoyo today you are my food for the Lokenthra elders, ndakangogaya zvinhu zvisingarevi chinhu nekuda beche rangu.Ndakamubata beche rese iri ndikanyatsonzwa kuti mwana akatakura uyu
She started touching my dik as well.Aiita zvekuvhura achivhara ganda remboro yangu achiincriza speed, ndakanzwa sendaideedzwa nekunakirwa,akaramba achidaro ndikanzwa zvino uronyo hwese hwaakuuya ndakahuregera huchiuya hwese ndobva hwati tsa-tsa-tsa throughout zvigunwe zvake zvese.Pandakapedza kutunda chete ndikati unonyeba,ndakatanga kumusvirawo nezvigunwe.Akatanga kuchemerera.Paakanga onyanya kuchemererera mboro yangu yakabva yamira this time with full force.veduwee,hameno!
Ndakabvisa zvigunwe ndobva ndapfekera mboro,nyoro,tsva,nyowan chaiyo.Geti paakanzwa temperature kudziya kupfuura zvigunwe mwana akagwinha-gwinha nekunakirwa nemboro.Ndakabva ndanyatsotsikirira mwana. Geti akasimudza chiuno chake, beche rese rikabva rauya mudenga ndakanzwa mboro yese kuti nya-nya-nya kupinda yese kubva ndaishaya kwe five minutes ndisingaone kuti yaenda kupi.
Ndopandakanzwa zvmwe zvinhu zvaitsvedza kunge derere zvaibva mubeche rake. Mwana akabata mukosho wangu akauvhura ndobva ndanzwa kupindwa mhepo, uronyo hwese hwakabva hwati wodyo muchibereko chaimo.Mwana akabva anakirwa pasi nekudenga ndobva andiruma huro,ndakaramba ndakanyudza mboro ndichizunza magaro kuti hubude hewse.Takaramba takabatana kudaro tichifemereka
Ndakazobva pamusoro dikita rakati bayai vanhu muviri wese.
Then Geti said shar ende unonaka ndanga ndagarisa zvekuti yanga yatova wayabrash chaiyo.Thanx ,waita hako.
Ndikati don’t worry koz ndinotunda anonzi ma ‘Labajam creams’ muzukuru,rega ndichienda kunorara see you tomorrow
by DrSviro · Published August 13, 2015
Next story Kusvirana na Maxine paTalk City yepaJoina City!
Previous story Short sviro story: Nyoro kuFiyo!